नयाँ सन्तको प्रश्न(FAQ) Archives - परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज
हाम्रो परमेश्वरको मण्डलीमा प्रत्येक वर्ष निस्तार-चाड मान्ने गरिन्छ । कसै-कसैले “विश्वासको जीवनमा औपचारिकताभन्दा विश्वास अझ महत्त्वपूर्ण छ” भन्ने गर्छन् । निस्तार-चाड मान्नैपर्छ र ? हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने भएकोले हामी निस्तार-चाड मान्छौं । एउटा उदाहरण दिन्छु, यदि बिरामीले डाक्टरलाई भरोसा गर्छु भन्छ, तर डाक्टरले भनेअनुसार गर्दैन भने के हुन्छ होला…
हिजोआज विपत्तिसम्बन्धी खबरहरू समाचारमा धेरै सुनिन्छ । त्यसैले होला हामीबाट विपत्ति पार गराउने निस्तार-चाडबारे म अक्सर सोच्न पुग्छु । विपत्तिसम्बन्धी खबरहरू जति धेरै सुन्यो त्यति नै मुक्तिको सन्देश अमूल्य लाग्छ । निस्तार-चाडचाहिँ यसको नाउँ आफैले बताएजस्तै, हामीबाट विपत्तिहरू पार गराउने चाड हो । मानिसहरूले निस्तार-चाड मानेर विपत्तिबाट सुरक्षा पाएको घटना…
परमेश्वरको मण्डलीमा चाहिँ किन शनिबार आराधना गरिन्छ ?
सिस्टर, शबाथ-दिनको आशिष् प्रशस्त पाउनुहोस् । आराधना सुरु हुन अझै पनि निकै समय बाँकी छ, सिस्टर त चाँडै आउनुभएछ । भक्तिपूर्ण मनले आराधना गर्नको निम्ति आराधना समयभन्दा अलि चाँडै नै आइपुग्नुपर्छ भनेर सुनेकीले । अझ मलाई त साह्रै निद्रा लाग्छ, त्यसैले आज बिहान सबेरै उठ्न निकै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो…